Kedu ndụmọdụ ndị SEO nwere ike ndị ọkachamara gị na-akwado maka menu weebụ?
Nchịkọta saịtị bụ ihe enyemaka kachasị maka igodo na saịtị gị, ọ na-enwe mmetụta kpọmkwem na njikwa ọrụ na njirimara-enyi. Ka ndị ọrụ na-enweta ihe nchọgharị weebụ nke Google na-ewe dị ka ọkwa dị oke mkpa, ịkwesịrị itinye aka na akụkụ a nke njikarịcha weebụsaịtị. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eche ihe mere saịtị gị anaghị arụ ọrụ nke ọma, oge eruola iji nlezianya lee ụdị igodo dị iche iche ị nwere. Ọ bụrụ na saịtị gị mara mma, ọ pụtaghị na ọ dị mfe ịnyagharịa. Ọ bụrụ na ndị ọbịa gị na ndị ahịa nwere ike ịchọta ụzọ ha gburugburu ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ụfọdụ ngwaahịa ndị ha na-achọ, ịkwesịrị ịnyeghachi ma ọ bụ mee ka saịtị gị dị mfe. Ọ ga - enyere gị aka imekwu ọnụego gị ma bulie ntụgharị. Enweghị usoro ọrụ nhazi nke ọma, ebe nrụọrụ weebụ gị SEO nwere ike bụrụ ihe na-abaghị uru. Ị na-egbu onwe gị iji mee ka ndị ahịa gị nwee ike ịgbanwere ya ma mee ka ha gbanwee gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị asọmpi. Na ntuziaka a dị mkpirikpi, ị ga-achọta ụfọdụ ndụmọdụ bara uru ka esi emepụta mkpokọta igodo ịntanetị kacha mma ma melite saịtị gị SEO.
Ebe ị na-edebe ihe nchọgharị weebụ
Ejila n'elu menu gị
Ọ bụ oge e chere na ebe nrụọrụ weebụ ga-enwe naanị otu nhọrọ. Ebe nrụọrụ weebụ nke oge a kwesịrị inwe obere njikọ dị na mkpịsị aka n'elu mkpokọta. Njikọ ndị a kwesịrị ikpughe nhazi saịtị ma na-enyere ndị ọrụ aka ịchọta ozugbo ihe ha chọrọ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ebumnuche weebụ e-commerce nwere ogwe nhọrọ abụọ. Nke mbụ na-ezo aka na igodo site na ibe na saịtị, ebe mmanya ọzọ nwere njikọ na ibe mpụga dịka profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ndebanye aha akwụkwọ akụkọ. M na-adụ gị ọdụ ka ị ghara itinye ihe niile n'otu nhọrọ. Ma ọ bụghị ya, menu gị ga - enwe echiche na-adịghị mma nke usoro gị. Mgbe ị na-emepụta ihe nchọgharị weebụ gị, ị kwesịrị ị na-elekwasị anya n'ihe ndị dị mkpa ma dị oke mkpa nakwa maka ihe mgbaru ọsọ gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndị ahịa gị kpọtụrụ gị site na e-mail ma ọ bụ nọmba ekwentị, tinye njikọ "Kọntaktị" na nkụnye saịtị.
Họrọ bọtịnụ kachasị mkpa
Iji melite saịtị SEO gị, ị ga-ahọrọ bọtịnụ ndị ga-abara gị uru ndị ahịa nwere ike. Iji họrọ bọtịnụ kachasị mma, ịkwesịrị iduzi nyocha, na-egwu ala na nchịkọta weebụ gị ma chọpụta peeji ndị nwere ọchịchọ onye kachasị elu. Hụ na bọtịnụ ndị dị ka "Nkwado Ndị Ahịa," "Tọọ na otu click," "Ịdenye aha," "Pọtụfoliyo" wdg. na-etinye na mkpokọta ụlọ ọrụ weebụ gị. Ebe nzigharị na-ezighị ezi nke bọtịnụ ndị a nwere ike igbochi azụmahịa gị ma bulie ọnụọgụ ego. Iji jide n'aka na ị na-adọta ndị ọrụ site na bọtịnụ ziri ezi, ịkwesịrị iji nyochaa mmelite nke ihe niile ị na-eji na-eji heatmaps Source .